I-Dropsy, yonke into oyifunayo kufuneka uyithintele kwaye uyiphathe kwintlanzi yakho | Ngeentlanzi
Nangona sibona iintlanzi zethu kwi-aquarium, zikhuselwe ngokubanzi, kude neearhente zangaphandle, izilwanyana ezinokubakho, njl. Banokugula. Phambi kwesifo sentlanzi, into ephambili kukuba uyiqaphele ukuze isebenze ngokukhawuleza. Kufuneka sicinge ukuba esi sifo siyosulela, siya kuba sengozini eseleyo kwiintlanzi zonke.
Kule meko, siza kuthetha Ukudumba kwintlanzi. Ukusuka kwinto eyiyo, ukuba inyangwa njani, ngeempawu kunye nendlela yokuqonda nokwenza kuyo. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngesi sifo?
1 Yintoni marn
2 Ungayichonga njani i-dropsy
3 Iimbangela zokudumba
4 Iintlobo ezinokuthi zichaphazeleke
5 Unyango lokudumba
Njengabantu, ukudumba sisifo esisekwe kuso ukugcinwa kolwelo emzimbeni. Oku kugcinwa kuveliswa luthotho lweengxaki kwintlanzi. Ngokubanzi, iingxaki ezivela ekugcinweni kolwelo zihlala zisilela ekusebenzeni kwezintso okanye ingxaki ethile emathunjini. Oku kwenza ukuba iintlanzi zingakwazi ukwenza iimfuno zazo ezisisiseko kwaye ziqale ukugcina ulwelo.
Esi sifo sinokubangelwa ziintsholongwane, ibhaktiriya, ukutya okungalunganga, i-parasite yangaphakathi, okanye umgangatho ombi wamanzi etanki leentlanzi (ukuba amanzi aqukethe isixa esikhulu se-ammonia).
Ungayichonga njani i-dropsy
Ukuze sikwazi ukubona ukuba iintlanzi zethu zinesi sifo kufuneka siziqwalasele kakuhle. Ezona mpawu zibonakalayo zezi ukudumba kwesisu okanye ukujikeleza amehlo. Ukuba ukudumba kuyaqhubeka, amaxolo aqala ukwahluka emzimbeni njengoko esiya edumba ngakumbi.
Iintlanzi zinokuba nokopha ngaphakathi kwaye ziphulukane nolawulo lwazo malunga nokuntywila, Oko kukuthi, sinokuthi siqaphele ukuba iqala ukuqubha ijonge ezantsi, kwicala layo, njl. Ukuba sibona ukuba iintlanzi ziqala ukudada ngolu hlobo okanye izikali zakho zikude kakhulu nomzimba, ayinakuphathwa.
Esi sifo sinokubangelwa zizizathu ezahlukeneyo. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, inokwenzeka xa ungondli iintlanzi ngendlela engalunganga, ubungakanani bamanzi asezantsi kunye nezinye izizathu.
Ngokubhekisele kwiibhaktheriya ezibangela ukudumba, siyafumanisa I-Aeromonas sp kunye neMycobacterium. Inokubangelwa luhlobo oluthile lwentsholongwane okanye iiparasites ezinje nge-sp., Lernaea cyprinacea, Oodinium sp. IArgulus sp. inokuba neentsholongwane ezahlukeneyo emathunjini ayo ezinokungeniswa kwintlanzi ngokuluma kwazo.
Iintlobo ezinokuthi zichaphazeleke
Kukho iintlanzi ezisemngciphekweni kwiintlobo ezahlukeneyo zezifo, iintsholongwane kunye neentsholongwane. Ukuba amanzi ezifumaneka kuwo iintlanzi zikumgangatho olungileyo, baya kuba nakho kangcono ukuxhathisa ii-arhente ezosulelayo kunokuba amanzi engekho kwimeko entle.
Ukutya kubaluleke kakhulu ngokunxulumene nesi sifo, ukuba asikufaki ukutya kakuhle (ubuncinci imizuzu emi-5 ngaphambi kokuba sikunike) kuyadumba esiswini sentlanzi kwaye kunokubangela iingxaki ezinzima zesisu iziphumo ezibangela ukudumba.
Nangona zonke iintlobo zentlanzi zinokubandezeleka ngenxa yesifo, kukho iintlobo ezinomdla wokugula kwesi sifo: I-Betta splendens, Trichogaster trichopterus, Colisa lalia, Helostoma temmincki, Macropodus concolor, Carassius auratus kunye neentlobo (Oranda, Intloko yeNgonyama, indebe ebomvu , Bubbles, Telescopic, njl ...), Ciprinus carpio (Kois), Mollynesias, Guppys kunye nezinye iiCichlids.
Ukuthintela usulelo olunokwenzeka okanye ukuchaphazela ezinye iintlanzi, kufuneka sahlule iintlanzi ezigulayo kwezinye iintlanzi. Ngokufanelekileyo, iintlanzi ezigulayo ziya kwenye i-aquarium apho zinokuphola zodwa.
Into ephambili ukuze iintlanzi ziphiliswe ngempumelelo kukunyanga ngokukhawuleza, kuba ukuba isifo sihambele phambili, asizukukwazi ukusinyanga. Ukwenza iipesenti ezili-10 zotshintsho lwamanzi mihla le, Ukuthintela iingxaki ze-nitrites, i-nitrate, i-ammonia okanye ukuqokelelwa kweziyobisi emanzini, sinokuthintela ukugcinwa kwamanzi kwiintlanzi.
Ukuba ingxaki yesi sifo ivela emathunjini, iintlanzi zethu azizokwazi ukufeza iimfuno zaso. Ukunceda iintlanzi ziphilise, Kuya kufuneka simyeke azile ukutya iintsuku ezi-2 okanye ezi-3, umtyisa kancinci kwaye umyeke akhawuleze kwakhona. Ngale ndlela, unokulawula ukuhamba kwamathumbu akho kwaye uphinde uqale ukukhupha inkunkuma yakho.
Ukubondla kakuhle kunye nokuthintela iingxaki zabo zokugcina ulwelo ekuqhubekeni, kulungile kakhulu ukubondla ii-ertyisi ezibilisiweyo ngaphandle kolusu.
Ukuba sifuna iziphumo ezikhawulezayo sinokukunika ngokudibanisa i-antibiotics ebanzi kunye ne-anti-inflammatories, imithombo (250 mg ngeelitha ezingama-25-30) kunye ubume (5 mg kwiilitha ezi-5).
Ukuba intlanzi iyasinda kuko konke oku, kwaye usebenzise i-prednisone kunyango. Yenza i-10% yotshintsho lwamanzi kangangeentsuku ezili-10 ngaphambi kokuba ubuyisele iintlanzi eluntwini, kuba i-prednisone iyi-steroid, kwaye ukwehla okubukhali kunokubulala iintlanzi.
Gcina ukhumbula ukuba iintlanzi zibuthathaka kwaye kufuneka zichongwe ngokukhawuleza, kuba, njengoko isifo siqhubeka, umonakalo uya kuba mbi kakhulu kwaye awunakukwazi ukunyangwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » Uwisa
UMARCE GALLARDO sitsho
SINOKULOBA I-KOI KWIPONDI ELI-5 OKUNGAKUMBI OKANYE IIMitha AMANZI = _ +… NCEDA UNCEDO
Phendula UMARCE GALLARDO